2007 December | R Blog..!
Archive for December, 2007	Happy New Year!!!
နှစ်ဟောင်းကို စွန့်ပြီး နှစ်သစ်ကို ၀င်တဲ့အခါမယမှာ R Blog..! ကို လာရောက်ကြသူအပေါင်းနှင့် သင်တို့၏မိဘများ ဆွေမျိုးများ သူငယ်ချင်းများ နီးစပ်ရာ အားလုံးသောသူများ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာချင်းနဲ့ ပြည့်ဝပြီး ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာ တစ်ထပ်ထည်းကျပါစေလို့ ကျွန်တော် Rapster88 မှ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်။
New Year အတွက် E Card လေးကိုတော့ ဒီမှာ ၀င်ပြီး Enjoy လိုက်ပါခင်ဗျာ Author: Rapster88	Categories: Special Events	Tags: About Life is beautiful.ppt virus
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mail box တွေထဲကို ခဏခဏ ၀င်လာတတ်တဲ့စာပါ။ Mail attachment ထဲမှာ Life is beautiful.ppt ဆိုတဲ့ powerpoint file ပါလာရင် မဖွင့်ဖို့၊ အဲဒီဖိုင်က ဖျက်အားပြင်းပြီး Mail account ကိုပါ ခိုးယူနိုင်တယ်လို့ ရေးပြီး သတိပေးတဲ့စာပေါ့။ ဒီက ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတောင် တစ်ခါက ပါလာလိုက်ပါသေးတယ်။
အဲဒီစာကို မြင်ရတာ များလာပေမယ့် တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတော့ မယုံလို့ Google မှာ ရှာကြည့်တော့မှ အဲဒီ virus က Hoax ဖြစ်နေမှန်းသိရပါတယ်။ Hoax ဆိုတာကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ ကောလဟာလပေမယ့် ယုံကြည် သွား လောက်အောင် ပြုလုပ်ထားလို့ တကယ်အစစ်လို့ ထင်ယောက်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့အရာ လို့ဖွင့်ပါမယ်။
ဒီ Hoax ကို မြင်ဖူးတဲ့သူများ ရှိသလို မမြင်ဖူးတဲ့လူတွေလဲ ရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က နည်းနည်းအကျဉ်းချုံးပြီး မြန်မာလို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ Mail က warning အနေနဲ့ လာတဲ့စာပုံစံပေါ့။ စာထဲမှာက “ဒီအကြောင်းကြားချက်ကို ဒီမနက်တင် Microsoft နဲ့ Norton ဆီက ရောက်လာတဲ့အကြောင်း၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Mail ထဲကို life is beautiful.ppt ဆိုတဲ့ power point attachment ပါလာရင် လုံးဝ မဖွင့်ဖို့၊ ဖွင့်မိရင် “It is too late now, your life is no longer beautiful” ဆိုတဲ့ message က screen ပေါ်မှာ ပေါ်လာပြီး ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိသမျှ ဖိုင်တွေ အားလုံးကို ဆုံးရှုံးကုန်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် email account ရဲ့ user name တွေ password တွေကို ဒီစာကို ပိုိ့လိုက်တဲ့ လူက control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ virus ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ တားဆီးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီ virus က စနေနေ့ (ဘယ်စနေနေ့လဲ ရေရေရာရာ မပါ) နေ့လည်မှာ စပြီး ပြန့်နှံပြီး AOL ကတောင် အတည်ပြုပြီး လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ anitivirus တစ်ခုမှ ဖျက်ဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ Virus ကို “life owner” ဆိုတဲ့ Hacker ကရေးသားခဲ့ပြီး Microsoft နဲ့တောင် တရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ အကြောင်းတွေ ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ hoax ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီစာကို ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ internet အသုံးပြုသူ အားလုံးဆီကို forward လုပ်ပေးခိုင်းပါတယ်။
Wikipedia နဲ့ Norton အရ ဒီ Hoax က ၂၀၀၂ ဇန်န၀ါရီ ၁၅ ရက်နေ့က စပြီး ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ တရုတ် နဲ့ ဂျာမာန် ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာများလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။တကယ်အပြင်မှာတော့ အဲဒီ virus ဟာ တွေ့ရှိမူနဲ့ ကူးစက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
- R Blog..! အာဘော်
ဒီတော့ အခုအချိန်ကစပြီး ကိုယ့် mail box ထဲကို ဒီစာ ၀င်လာခဲ့ရင် သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း forward မလုပ်ပဲနဲ့ တစ်ခါတည်း အမှိုက်ပုံးထဲကို လစ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ Hoax တွေရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပြန့်သွားစေချင်တာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ အခုသုံးနေတဲ့ Mail service တွေဖြစ်တဲ့ Yahoo, Google တို့ဟာ နည်းပညာပိုင်းမှာ လန်ထွက်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ mail service တွေမှာလဲ အစွမ်းထက် virus scanner တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သာမာန် virus တစ်ခုဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အဲဒီ mail service တွေမှာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် Virus တစ်ခုဟာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး (ဖျက်အားမပြင်းရင်) နာရီပိုင်းအတွင်း Antivirus ကုမ္ပဏီတွေက (such as Norton, F-Secure, Kaspersky) ချက်ချင်းကို Patch, Update, Removal Tool ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ကို Virus Defination update ပုံမှန်လုပ်ထားရင် စိတ်ချရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဖျက်အားပြင်း worm (virus) ဖြစ်တဲ့ Sasser (၂၀၀၄ မှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်) နောက်ပိုင်းမှာ ဖျက်အားပြင်း virus တွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့နှုန်း သိသိသာသာ ကျသွားတာကို ကြည့်
ချင်းအားဖြင့် Antivirus တွေ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း တက်လာတာကို သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်.. နှစ်ခါ မစဉ်းစားပဲ ဖျက်လိုက်ပါ။ Ref: Google, Norton, Wiki, Hoax Slayer, Break The Chain
Author: Rapster88	Categories: Article, Tips Tricks and Tweaks	Tags: How to hack password from Google Talk?!!
Author: Rapster88	Categories: Hack, Tips Tricks and Tweaks	Tags: Check Bagan’s Proxies with MultiProxy!
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က Bagan Cyber Tech ရဲ့ Proxy Server တွေ ခဏခဏ ဒေါင်းခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း Proxy ၁၁ ခုရှိတာ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး အလှည့်ကျ ဒေါင်းနေလို့ proxy ကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု စမ်းလိုက် ပြောင်းလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် Proxy တွေ ဒေါင်းလို့ Download ကြီးကြီးမားမား လုပ်တဲ့သူတွေလဲ ဒေါင်းလုပ်ကို လွတ်မထားရဲတာလဲ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ Proxy Server တွေကို အလုပ် လုပ်မလုပ် စောင့်ကြည့် (Monitor) လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ tools လေးတစ်ခုလောက်ကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုက်ရှာနေတုန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ကို elite.crysis က ကျွန်တော့်ကို MultiProxy ဆိုတဲ့ software ကို ပြောပြပါတယ်။ တကယ်တော့ Multiproxy က Proxy Monitor လုပ်တဲ့ software မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က Internet Connection ကို Proxy တစ်ခုတည်းပေါ်မှာ မသွားပဲ proxy ၄ ခုရှိရင် ၄ ခုလုံးပေါ်မှာ မျှပြီး သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။
ကဲ.. ဘယ်လိုသုံးမလဲ ကြည့်ရအောင်..၁။ Multi Proxy ကို ဒီမှာ Download ပြီး Install လိုက်ပါ။ (FREE)
၂။ Run ပြီးရင် “Options” ကို ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် “Proxy Servers List” ထဲကိုထပ်ဝင်။
၃။ အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ default proxy တွေကို select all မှတ်ပြီး right click နှိပ်ပြီး ဖျက်လိုက်ပါ။
၄။ အောက်က “Menu – >” ကိုနှိပ် ပြီးရင် Add ကိုနှိပ်ပြီး Proxy တွေကို ထည့်ပေးပါ။
၅။ Bagan ရဲ့ Proxy 11 ခုလုံးလုံးကို ထည့်ရမှာ ပျင်းတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ Proxy List ကို ဒီမှာ download လိုက်ပါ။ (Right click on it and select “save link as”)
၆။ Menu ကိုနှိပ် Files > Import Proxy List ကိုရွေးပြီး ခုနက dl ထားတဲ့ proxy list (txt) file ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Proxy list ၁၁ ခုလုံး ၀င်နေတာတွေ့ရပါမယ်။
၇။ “Ok” ကို နှိပ်ပြီး Options ကနေ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် “Check all proxies” ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘယ်ဖက်က အကွက်ထဲမှာ “testing remote proxies” ပေါ်နေတာတွေ့ရပါမယ်။
၈။ အဲဒီ စာသား ပျောက်သွားပြီးရင် Options > Proxy Server List ထဲကို ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Working proxies တွေက အစိမ်းရောင်နဲ့ ပြနေတာတွေ့ရပါမယ်။
Proxy တွေပေါ်မှာ Bandwidth ကို မျှပြီးသုံးချင်ရင်
၁။ Browser ရဲ့ Proxy setting မှာ host ကို localhost နဲ့ port ကို 8088 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။၂။ ဒါဆိုရင် Multiproxy ရဲ့ Connection Status မှာ proxy တွေပေါ်ကနေ bandwidth တွေ မျှခွဲပြီး သုံးနေတာ တွေ့ရပါမယ်။
Note. Meebo.com ကို multi proxy သုံးပြီး ၀င်လို့မရပါဘူး။ Meebo က proxy sesitive ဖြစ်လို့ proxy ပြောင်းသွား တာနဲ့ reconnect ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။
Bagan ရဲ့ Proxy server တွေကို သိချင်ရင် ဒီမှာ ၀င်ကြည့်လို့ရပြီး Browser ကို proxy server setting တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းချင်ရင် Firefox အတွက် ဒီမှာ နဲ့ IE အတွက် ဒီမှာ ၀င်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks, Useful Applications	Tags: Get ownership permission ofafile or folder in Vista with ease
Windows Vista မှာ Administrator နဲ့ Login ၀င်ထားရင်တောင် System File (C:\_Windows\_) တွေကို Edit လုပ်မယ်ဆိုရင် Ownership permission ကို ထပ်ပြီး ယူရပါတယ်။ (Windows Vista RTM ထွက်ခါစမှာ Dr.Chan RTM Crack ကို သုံးခဲ့ဖူးသူတွေ File Permission တွေယူပြီး File တွေ replace လုပ်ခဲ့ရတာ မှတ်မိမှာပါ။)ဟိုနေ့က ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ My Digital Life ကို ၀င်မွှေလိုက်တာ ဒီ Registry Tweak လေး ထွက်လာတယ်။ သူက ဘယ်လို အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ ကိုယ် Ownership လိုချင်တဲ့ file/folder ကို Right Click နှိပ်ပြီး “Take Ownership” ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ဖိုင်ကို ownership ရသွားတယ်။ အရင်ကလို Right click > Properties တွေ ၀င်စရာ မလို တော့ဘူး။
Reg Key ကို အောက်က link မှာ download လုပ်ပြီး Double click လိုက်ရင် Reg Key ကို install လုပ်မလားမေးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Ok နှိပ်လိုက်ရင် Install ပြီးပါပြီ။ (UAC ဖွင့်ထားရင်တော့ UAC ကို အရင် allow ပေးရပါတယ်။)
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks	Tags: ဒီရက်ပိုင်း SMS ပို့လို့မရ ဖြစ်နေပါသလား?? ဒီလိုလုပ်ပါ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်က GSM ဖုန်းအချို့ SMS ပို့လို့ မရတာ ဖြစ်နေပါတယ်။ +9595920003 Service Center ကို သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတွေက ပို့မရတာပါ။ +9595910003 လို့ ပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ Thanks to Ko ZeroTrash for testing sms with me.
Author: Rapster88	Categories: News, Tips Tricks and Tweaks	Tags: Official Vista SP1 RC Standalone Installer Direct Download Links from Microsoft Server
Mircrosoft ကနေ Windows Vista အတွက် update ဖြစ်တဲ့ Service Pack 1 (RC) ကို public ကို စမ်းသပ်ဖို့ ထုတ်ဝေလိုက်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က Public ကို မချပေးသေးတဲ့ အတွက် Windows Update ကို Registry Tweak လုပ်ပြီးတော့ SP1 Update ကို ရအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ Official Direct Links တွေဖြစ်လို့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ Download လုပ်ပြီး Install ရုံပါပဲ။Install မလုပ်ခင်မှာ ဘာတွေကို သတိထားပြီး သိသင့်လဲ ဆိုတာကိုလဲ Microsoft က Document တစ်ခုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ အခုထုတ်တဲ့ RC ဟာ အချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ (Time Limited) update ပါ။ June 30, 2008 ထိပဲ သက်တမ်းထုတ်ပေးထားပါတယ်။ (အဲဒီအချိန်ဆိုရင် Final Release ထွက်လောက်ပါပြီ) နောက်ပြီး RC ကို တင်လိုက်ရင် Screen ရဲ့ ညာဖက် ထောင့်နားမှာ “Evaluation Copy” ဆိုတာလေး ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စက်က Activate လုပ်ထားတာ ပျက်သွားတာ မဟုတ်ပဲ SP1 RC ကပဲ “Evaluation Copy” ဖြစ်တယ်လို့ Microsoft က Install မလုပ်ခင်မှာ ဘာတွေကို သတိထားပြီး သိသင့်လဲ ဆိုတဲ့ document ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။ Windows အစစ်ကို Activate လုပ်ထားတဲ့ (Genuine) တွေသာ ဒီ RC ကို သုံးလို့ ရမယ်လို့လဲ ရေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အဲဒီ doc ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
သတိ။ ။ RC = Release Candidate ဆိုတာ Final Version မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် Bug ပါနိုင်ပါသေးတယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စက်တွေမှာ မစမ်းသပ်ဖို့ Microsoft ကလဲ မှာထားပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်သာ လုပ်ကြပါလို့ ကျွန်တော်က ထပ်ပြောလိုပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: OS, Tips Tricks and Tweaks	Tags: ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘယ်လိုလဲ Vista
Keznews.com မှာ ဖတ်ရတဲ့ Article လေးတစ်ခုနဲ့ အဲဒီ articles ရဲ့ comment ထဲမှာ reader တစ်ယောက် ပြန်ပြီး ၀င်ရေးသွားတာကို သဘောကျလို့ အဆင်ပြေသလို ကျွန်တော်က ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလမှာ Windows Vista ရဲ့ တရားဝင်ဖြန့်ချီရေး စခဲ့ပြီးနောက်မှာ Vista နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ချီးမွန်းသံတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ Mircosoft ကိုယ်တိုင်ကတော့ Vista ကို ချီးမွန်းခန်း အပြီအပြင်ကို ဖွင့်ခဲ့ပြီး (“Wow” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့) ရောင်းချခဲ့ပေမယ့် Windows Vista ဟာ ထင်သလောက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာတွေကို ထင်သလောက် မဟုတ်ခဲ့ပြီး ဘာတွေကတော့ တကယ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန် လာတယ် ဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်..Vista ကို သုံးဖို့ System Requirement တောင်းတာ မြင့်နေတဲ့ အချက်က Vista ကို ဝေဖန်ချက်တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Vista ထွက်ထွက်ခြင်းမှာ လူအများစုရဲ့ System တွေက Vista ကို Run တယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ ရှိနေကြပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Vista အတွက် software တွေ (အထူးသဖြင့် Antivirus လို Security application တွေ) နဲ့ Hardware တွေအတွက် Drivers တွေ အဆင်သင့်မရှိခဲ့သေးတာပါ။ Windows XP ကို အမြဲသုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကို Vista ထည့်ပေးပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်းကြည့်ရင် ရွာလည်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Vista ရဲ့ Interface က XP နဲ့ အနည်းငယ်ပဲ ဆင်တူပြီး တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။( ဥပမာအားဖြင့် IP ထည့်ဖို့အတွက် Network Connection setting ကို သွားဖို့ ကြားထဲမှာ ၂ ဆင့်လောက်ခံနေရတာတွေ.. နောက်ပြီး Dial up ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာ သုံးပြီးတဲ့အချိန်ကို Status ကြည့်ရင် XP လောက် မလွယ်ကူတာတွေ )။
Vista ရဲ့ UAC ဆိုတဲ့ feature ကလဲ user တွေကို ရွေးစရာ လမ်းမရှိအောင် လုပ်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Security ကောင်းချင်လို့ UAC ဖွင့်ထားခဲ့ရင် အမြဲလိုလို ဘာလုပ်လုပ် Permission ကို allow ပေးရတာ အလုပ်ချိန်ကို နှောင့်နှေး စေပါတယ်။ ဒါကို မကြိုက်ရင် တစ်ခြားရွေးစရာ နည်းမရှိပဲ UAC ကို လုံးဝ ပိတ်ထားရပါမယ်။ Do or Die လို့ user ကို ရွေးခိုင်းသလိုပါပဲ။ Windows XP မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ မြန်ဆန်ပေမယ့် Vista မှာတော့ အဲဒီလို features တွေကြောင့် XP မှာလောက် မမြန်ဆန်နိုင်သေးပါဘူး။
Vista အတွက် အရေးပါတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ Linux လဲမဟုတ် Apple ရဲ့ Mac လဲ မဟုတ်ပဲ Windows XP ဖြစ်နေပါတယ်။ ထွက်ခဲ့သမျှ Windows တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Windows XP ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို Vista က ပြန်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိအချိန်မှာ Software vendor တွေနဲ့ hardware vendor တွေအပြင် Internet ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Tech Support Forum တွေ နဲ့ ဒီ မြန်မာပြည်က အားလုံးသော Computer Service ပေးတဲ့ ဆိုင်တွေဟာ user တွေကို Windows XP နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ Support ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ပေမယ့် Vista ကို ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စောင့်ရဦးမှာပါ။
နောက်ပြီး Vista ဟာ Timing out သွားခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့ US နဲ့ ဥရောပ တိုင်းပြည် တွေမှာက ဘယ်ပစ္စည်းမဆို အသစ်အဆန်းထွက်ရင် နွေဦးနဲ့ X’mas မတိုင်ခင် ဆောင်းတွင်းမှာ ကြော်ညာပြီး ရောင်းချ တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုဘာလို့ Vista က နွေဦးမှာရော ဆောင်းဦးမှာပါ မထွက်ခဲ့ပဲ ကိုးလို့ ကန့်လန် အချိန် January ကျမှ ထွက်ခဲ့တာလဲ (RTM ကိုတောင် November မှ ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်)?? ဒီမှာ စဉ်းစားစရာ ပေါ်လာတယ်.. Vista ဟာ သူ့ရဲ့ ပြီးရမယ့် အချိန်မှာ မပြီးခဲ့လို့လား??
ဒါ့အပြင် Microsoft က Windows Vista အတွက် Developer မဟုတ်တဲ့ လူပေါင်းမြောက်များစွာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဂုရုတွေ၊ Microsoft ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ Beta testers and customers တွေများစွာရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို လေ့လာပြီး Vista အတွက် Features အသစ်တွေ စဉ်းစားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
Author: Rapster88	Categories: Article	Tags: Vista က Snipping Tool ကို ပိုမိုအသုံးပြုခြင်း
Vista နဲ့ XP Media Center 2005 မှာ Snipping Tool ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုပါပါတယ်။ အသုံးဝင်ပုံကတော့ Print Screen လိုမျိုး Screen တစ်ခုလုံးကို Screen Shot ရိုက်စရာမလိုပဲ ကြိုက်တဲ့ နေရာ တစ်ကွက်ကိုပဲ Select မှတ်ပြီး Screen Shot ရိုက်လို့ ရတဲ့ Built in tool တစ်ခုပါ။ Snipping Tool သုံးတဲ့နေရာမှာ ပြဿနာပေးတာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Focus Sesitive ဖြစ်တာတွေကို Screen Shot ရိုက်လို့ မရတာပါ။ ( Focus Sensitive ဆိုတာ ဥပမာအားဖြင့် Start Menu, Tooltips, Right Click Context တွေဟာ သူတို့အပေါ်ကနေ Mouse pointer ရွှေ့သွားပြီး တစ်ခြားတစ်ခုကို click သွားနိုပ်လိုက်တာနဲ့ Screen ပေါ်ကနေ ပျောက်သွားတာပါ)။ အဲဒါတွေကို ဘယ်လို screen shot ရိုက်မလဲဆိုတာ အောက်က Read More ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ Snipping Tool ကို အရင်ဖွင့်လိုက်ပါ (Start > All Programs > Accessories > Snipping Tool)၂။ Snipping Tool တက်လာရင် “Esc” ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Snipping Tool က Ready စောင့်နေလိမ့်မယ်။၃။ ဥပမာ Start Menu ကို Screen Shot ရိုက်ချင်ရင် Start Menu ကိုအရင် နိုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ Ctrl + Print Screen ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။၄။ ဒါဆိုရင် Start Menu ပါ Screen ပေါ်မှာ အသေဖြစ်သွားပြီး Sniping Tool နဲ့ Shot ရိုက်လို့ ရသွားပါပြီ။
A very old post on MyDigitalLife.info
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks, Useful Applications	Tags: Did you know? 
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks	Tags: Older Entries
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,724 spam comments blocked byAkismet